Home Wararka Cabdi Siciid Muuse oo Kala Tuurid ku wada W. Ariimaha Dibadda.
Cabdi Siciid Muuse oo Kala Tuurid ku wada W. Ariimaha Dibadda.
MOL ayaa ogaatay warar sheegaya in maanta oo sabti aheyd shaqada laga eryey diblomaasiyiin katirsanaa Wasaarada Arimaha dibada Soomaaliya.
Inkastoo hay’adaha dawlada xeer kasoo baxay Madaxweyne Farmaajo la sheegay in aan xil laga qaadi karin xilna la magacaabi karin xilligaan hadana Wasaarada Arimaha Dibada ayaa iyadu la sheegay in xeerkaasi uusan saameyn ku laheyn.
Diplumaasiyiin ka howlgala Wasaaradda arimaha dibadda Soomaaliya ayaa caawa fiidkii waxay xaqiijiyeen in dhowr sargaal oo ku magacaabnaa xilal sare laga qaaday maanta loona magacaabay xubno kale.
Cabdisiciid Muuse waa shakhsiga iibsan raba guriiga weyn ee safaaradda Somaliya ee Rooma, waana sababta shaqaale badan loo eryayo si loo banneysto dhaca. Waxaa kamid ahaa dadkii la eryey safiirkii Rooma Gen. Cabdiraxman Sh Ciise.
Wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali, ayaa xilka ka qaaday agaasime Waaxeedyada kala ah:
1: Agaasimihii Waaxda iskaashiga Caalamiga ah.
2: Agaasimihii Waaxda Africa.
3: Agaasimihii Arkiifiyada (qeybta keydka)
Wasiir Cabdi Saciid Muuse ayaa ka mid ah xubnaha aadka ugu dhaw Madaxweyne Farmaajo qeybna ka yahay mas’uuliyiinta ka shaqeenaya dib udoorashadiisa.
Previous articleMaxaadan Ogeyn oo ka Socda Hoteellada Muqdisho oo dhib weyn ku ah Doorashada.
Next article[DIGNIIN] Doollar Been Abuur ah oo la soo geliyay Muqdisho si loogu iibsado codadka Xildhibaanada
Maxaa ku soo kordhay qaraxii iyo dilkii ka dhacay Baydhabo iyo...
Wasiir arimaha Gudaha oo loo diiday in uu soo fadhiisto gogol...